फोरम र राजपाका नेता सांसद बन्न चलखेलमा ! – ejhajhalko.com
फोरम र राजपाका नेता सांसद बन्न चलखेलमा !
८ पुष २०७४, शनिबार ०३:२४ 180 पटक हेरिएको
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालभित्र प्रतिनिधिसभा समानुपातिक सांसद बन्न चलखेल सुरु भएको छ। दुबै दललाई प्रतिनिधिसभा समानुपातिकमा क्लस्टर समावेशी सूची मिलाउनुपर्ने बाध्यता नरहेपछि नेताहरु चलखेलमा लागेका हुन्।
यस्तो प्रावधानले राजपा र संघीय फोरमले समावेशी आधारमात्र मिलाउनुपर्नेछ। ऐनको यस्तो प्रावधानले राजपा र फोरमलाई क्लस्टरमा रहेकाहरुलाई मात्रै समानुपातिकमा सिफारिस गरनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यो खबर आजकोनागरिक दैनिकमा छ ।